प्रवास - Janata Times
एनआरएनए युकेमा मनोनित ५ सदस्यलाई सपथ
एनआरएनए यूकेको सातौं कार्यसमितिमा मनोनित ५ जनाको -अप सदस्यहरुलाई एक कार्यक्रम बीच स्वागत गरेको छ । अध्यक्ष योगकुमार फगामीको अध्यक्षतामा सोमबार बेलुकी फार्नबोरोस्थित गोर्खा प्यालेस रेष्टुरेण्टमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरिएको हो।
जनसंपर्क समिति अमेरिकाका सभापति बिष्ट कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित
नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द विष्ट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य पदमा मनोनीतमा पर्नुृभएको छ ।
साउदीले १९ विधामा विदेशी कामदार नलिने, नेपालीसहित कयौं विदेशी कामदार प्रभावित हुने (विधा सहित)
काठमाडौं, कात्तिक २८ साउदी अरबले जनवरीदेखी १९ वटा विधामा विदेशी कामदार नलिने र भएकालाई पनि घर पठाउने भएको छ । आफ्नै नागरिकको रोजगार सुनिश्चित गर्ने उदेश्यका साथ साउदीले १९ प्रकारका रोजगारीमा विदेशी कामदार नलिने नीति लिएको हो । यो सगै नेपालीसहित कयौं विदेशी कामदार प्रभावित हुने भएका छन् । स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार साउदीले एकाउन्टेन्ट, […]
एनआरएनए अमेरिका अध्यक्ष डा. पौडेलले ह्युस्टनमा सामुदायीक केन्द्र निर्माणका लागी ५ हजार डलर सहयोग गर्ने घोषणा
गैर आवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए० अमेरिकाका अध्यक्ष डा. केशब पौडेलले ह्युस्टनमा बन्न लागेको नेपाली सामुदायीक केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर तथा मन्दिरका लागी ५ हजार डलर ५ लाख रुपैंया भन्दा बढी सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
काठमाडौं, कात्तिक २७ । गैरआवासीय नेपाली संघ वेल्जियमले संकलन गरेको ४ लाख रकम सुर्खेत गुर्वाकोट नगरपालिका १३ का दिपा रानालाई कृत्रीम खुट्टा खरिदको लागि सहयोग स्वरुप हस्तान्तरण गरेको छ । एक कार्यक्रमकाबीच गैरआवासीय नेपाली संघ वेल्जियमका निवर्तमान अध्यक्ष गंगाधर गौंतमले सो सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभयो । कार्यक्रमकाबीच जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका अध्यक्ष आनन्द विष्टले आफ्नो संस्थाको तर्फबाट […]
Tweets by newroad_com